माधव नेपाल समुहमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यकाे हस्ताक्षर संकलन, काे काेले गरे सही ? – GALAXY
माधव नेपाल समुहमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यकाे हस्ताक्षर संकलन, काे काेले गरे सही ?
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निर्णायक तयारीमा लागेका छन् । उनले केही दिनमै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष शर्तसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि निर्णय लिन आफू पक्षीय स्थायी कमिटी बैठक राख्ने तयारी समेत गरेका छन् ।